Ambanja, Ambilobe, Antsohihy Sahan-drongony ana hektara maro nopotehina
Mitohy hatrany ny hetsika fiadiana amin'ny Jamala ataon'ny zandarimaria ao anatin'ny distrikan'i Ambanja sy Ambilobe ary Antsohihy.
Araka ny fampitam-baovaon’ny zandariamariam-pirenena : “Hatreto aloha dia efa an-taoniny maro no potika eny an-tsaha sy izay efa voatatitra aseho ny manampahefana.” Midina anaty ala ireo mpitandro filaminana misava izany fambolena tsy manara-penitra sy tsy manara-dalana izany. Avy amin’itony ny loharanon’ireo tratra teny amin’ny taksibrosy sy teny an-dalam-pilanjan’ireo mpanao trafikana mahadomelina hihazo ny renivohitra sy Mahajanga izay tra-tehaka tato anatin’ny volana vitsy. Andrasana ny fanadihadiana lalina sy ny tohin’ny raharaha mahakasika ny tompon’ny fambolena azy ireto. Tany amin’ny faritra avaratra sy atsimon’ny Nosy ary ny faritra Alaotra iny no nahitana ireo jamala maro mbola eny an-tsaha.